Haalata filatameef dirqaalalee qindeessi.
Haalata Itti Aanu
Haalata ammeetif akaakuu agrsiisa. Haalata haaraa yoo uumtu ykn haaromsitu, tarree irraa 'Haalata Maammiloo' fili.
Haalata durmurtaawaadhaf akaakuu jijjiiruu hin dandeessu.
Dhangeessuu sirri haalata ammee keessatti fayyadu ibsa.
Title is: Gurmeessaa